Kuboshwe umfundi, 15, ngokugwaza abulale omunye e-KZN | News24
Kuboshwe umfundi, 15, ngokugwaza abulale omunye e-KZN
Durban - Kugwazwe kwabulawa umfundi oneminyaka engu-17 ubudala obenza uGrade 11 esikoleni samabanga aphezulu iNkosi Mgwazeni High esiseMtubatuba, KwaZulu-Natal, phambi kwabanye abafundi nothisha ngoLwesithathu.
Kusolwa ukuthi lo mfundi ugwazwe ngemuva kwengxabano okusolwa ukuthi ihlobene neyokugwazana kwabafundi bezigodi ezahlukene.
Ngokombiko weSolezwe uThembinkosi Mlungwana onguSihlalo webhodi elengamele isikole uthe sekunesikhathi kunokungaboni ngasolinye phakathi kwabafundi bezigodi ezakhele le ndawo okungesakwaSomkhele nokuyilapho lesi sikole sakhiwe kuso nesaseDolomba.
OLUNYE UDABA: Kubulawe umfundi ngaphandle kwamasango esikole e-KZN
UMlungwana uphinde wathi ukungezwani kwabo akwaziwa ukuthi kusukelaphi njengoba engekho noyedwa ofuna ukusho ukuthi yini le ebangwayo.
Ubaba kamufi uMhlabunjani Ndawonde ubengakwazi nokukhuluma ngesikhathi abephephandaba bexhumana naye mayelana nodaba.
UNdawonde uthe babhekene nobunzima ekhaya njengoba bengazi bazothathani bahlanganise nani kanti futhi akakholwa ukuthi umfana wakhe ubulawe ngenxa yokungezwani kwezigodi.
"Ngikholwa wukuthi sikhona esinye isizathu sokugwazwa kwendodana yami."
UCaptain Nqobile Gwala okhulumela amaphoyisa aKwaZulu-Natal uthe kuboshwe umfundi oneminyaka engu-15 ubudala ngelokugwaza abulale.
Imbangela yokubulala iyaphenywa.
UMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal uthumele abaluleki ukuze beyokweluleka ngokomqondo abafundi bakulesi sikole.